Sedex qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay duleedka Magaalada Jowhar | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Sedex qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay duleedka Magaalada...
Sedex qof oo ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay duleedka Magaalada Jowhar
Jowhar(SONNA)-Wararka naga soo gaaraya Magaalada Jowhar ayaa sheegaya in shil gaari oo ka dhacay Gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaan koonga oo qiyaastii u jirta 5-km magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka Hirshabeelle.
Weriyaheena Magaalada Jowhar Abuukar Bacadle oo gaaray Goobta uu shilka ka dhacay ayaa inoo xaqiijiyay in shilkii galabta ka dhacay degaanka koongo ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 3 ruux oo midu tahay dumar,halka dhaawacana yahay 4 ruux.
Dadka dhintay iyo kuwa dhawacmay ayaa kala saarnaa gaari Nooha ah oo ka yimid Muqdisho iyo Mooto Bajaaj kuwaasi oo si kedisa iskugu dhacay.
Gudoomiye ku xigeenka dhanka Siyaasada Gobolka Shabeelaha dhexe Mudane Maxamed Cabdi Sheekh Muumin iyo Taliyaha saldiga Jowhar dhame Maxamed Siyaad canjeex ayaa sheegay inay u gurmadeen dadka shilkan waxyeelada ka soo gaartay isagoo xusay in dadkii ku dhawacmay la dhigey isbitaalka magaalada Jowhar.
Previous articleXildhibaannada Golaha shacabka oo Akhrintii 1-aad marsiiyay labo Hindise sharciyeed
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre oo khudbad ka jeedin doona shirka Golaha guud ee QM